FAA na -edobe mpaghara enweghị efe n'elu àkwà mmiri Texas jupụtara na ndị kwabatara 10,500 na -akwadoghị iwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » FAA na -edobe mpaghara enweghị efe n'elu àkwà mmiri Texas jupụtara na ndị kwabatara 10,500 na -akwadoghị iwu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị kwabatara n'ụzọ iwu na -akwadoghị achịkọtala n'okpuru àkwà mmiri ahụ n'oge na -adịbeghị anya, onye isi obodo Del Rio Bruno Lozano tinyere ọnụ ọgụgụ ahụ karịa 10,500 ruo abalị Tọzdee, na -akpọkwa Onye isi ala Joe Biden ka ọ lebara "nsogbu na -aga n'ihu" na ókèala Texas. obodo.
FAA na-ewepụta mpaghara ụgbọ elu na-anaghị efe efe n'izu abụọ n'elu akwa Del Rio na Southern Texas.
Ihe karịrị puku mmadụ iri na -akwabatara iwu na -akwadoghị gbakọtara n'okpuru Ọdọ Mmiri Del Rio na Texas n'ime ụbọchị ndị na -adịbeghị anya.
Amachibidoro mpaghara FAA enweghị ụgbọ elu na arịrịọ nke US Border Patrol nke kwuru na drones na-egbochi ụgbọ elu ndị mmanye iwu.
Ụlọọrụ Federal Federal Aviation Administration (FAA) wepụtara ọkwa na-ekwupụta ụbọchị anọ anaghị efe efe maka sistemụ ụgbọ elu na-achịkwaghị achịkwa (UAS) n'elu Del Rio Bridge na ókèala US-Mexico, na ndịda Texas.
N'izo aka na "ebumnuche nchekwa pụrụ iche" FAA machibidoro drones ife efe efe Ọdọ Mmiri Del Rio ebe ihe karịrị mmadụ 10,000 kwabatara n'ụzọ iwu na -akwadoghị, na -egbochi ndị mgbasa ozi mpaghara ijide ihe nkiri ikuku nke saịtị ahụ.
The FAA Otu onye mmekọ Fox News mpaghara, nke buru ụzọ gosipụta mmachibido iwu nke drone, bụ nke weghaara ihe nkiri ikuku dị egwu na -egosi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị kwabatara n'okpuru àkwà mmiri ahụ. N'oge ihe nkiri a na -ekesa n'ụtụtụ Tọzdee, a na -eme atụmatụ na ihe dị ka mmadụ 8,200 nọ ebe ahụ, n'agbanyeghị na onye isi obodo tụrụ aro ka igwe mmadụ ahụ toro site na puku abụọ ma ọ bụ karịa n'ime awa kemgbe. A kọrọ na ọtụtụ ndị na -akwaga mba ọzọ bụ ndị Haiti.
Ọ bụ ezie na ọkwa mbụ nke FAA zoro aka na naanị nchegbu “nchekwa”, nkwupụta nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwetara kwuru na etinyere mpaghara adịghị efe efe na arịrịọ nke US Border Patrol, nke kwuru na drones na-egbochi ụgbọ elu ndị mmanye iwu na oke. ” Agencylọ ọrụ ahụ gbakwụnyere, ka osila dị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike nwee ike ịrịọ nnwere onwe iji gaa n'ihu na -arụ ọrụ drones na mpaghara ahụ.
Gọvanọ Texas Greg Abbott emebekwala ebumnuche na Biden maka okwu oke ala, na -ekwu na nzaghachi nchịkwa ahụ bụ "ihe jọgburu onwe ya" na otu n'ime "oke nleghara anya". Na mbido Tọzdee, gọvanọ nyere ndị ọchịchị obodo iwu ka ha mechie isi ụzọ mbata isii n'akụkụ ókèala ndịda “iji kwụsị ndị njem a [ndị mbịarambịa] gafere na steeti anyị.”
Del Rio bụ naanị otu n'ime iri na abụọ dị otú ahụ ebe ịgafe n'akụkụ ókèala Texas na Mexico. Ndị mbịarambịa na-abata na ngafe ndị a nwere ike ịrịọ mgbaba ma ọ bụ gosi onwe ha na Border Patrol ka ejide ha wee tọhapụ ha na US, yana usoro ọchịchị 'njide na mwepụta' nke Onye isi ala Biden weghachiri na mbido afọ a. Biden gbalịkwara ịkagbu iwu onye isi ala Donald Trump 'Nọgide na Mexico', nke mere ka ụfọdụ ndị na-achọ mgbaba chere usoro mbata na ọpụpụ na mpụga US, n'agbanyeghị na Courtlọikpe Kasị Elu kagburu mmegharị ahụ, na-arụ ụka na Biden esoghị usoro kwesịrị ekwesị. mechie omume.